KDE Plasma desktop pasina mubvunzo ndiyo pini yepamusoro yekugadzirisa, sezvo iwe uchikwanisa kushandura chero chaunoda. Unogona kuenda padanho rekuita kuti iite se tiling hwindo maneja.
KDE Plasma inogona kuvhiringidza mutangi nedhigirii yemaitiro ainopa. Sezvo sarudzo dzinowanzo kuunganidza pamusoro pesarudzo, mushandisi anotanga kurasikirwa.
Kugadzirisa iyo nyaya, ini ndinokuratidza iwo akakosha mapoinzi eKDE Plasma maitiro ayo iwe aunofanirwa kuziva nezvayo. Izvi ndizvo zvimwe
Kugadzirisa KDE Plasma
Ndashandisa KDE Neon mune ino dzidzo, asi iwe unogona kuitevera nechero kugovera kunoshandisa KDE Plasma desktop.
Desktop mahwindo anogona kuwedzera nyore kune mushandisi ruzivo, sezvo iwe uchigona kuwana pakarepo zvinhu zvakakosha pane desktop.
Vadzidzi uye nyanzvi mazuvano vari kushanda nemakomputa kupfuura nakare kose, widget inobatsira inogona kuve inonamira manotsi.
Dzvanya-kurudyi pane desktop uye sarudza "Wedzera Widgets".
Sarudza iyo widget yaunoda, uye ingo dhonza uye udonhedze kune desktop.
Iyi iri pachena. Kuchinja iyo Wallpaper kushandura kutaridzika kwedesktop yako.
Pane iyo Wallpaper tab iwe unogona kuchinja zvinopfuura iro chete Wallpaper. Kubva ku "Marongerwo" pulldown menyu, unogona kusarudza kana desktop yako ichizove nezviratidzo kana kwete.
The "Folder View" marongedzero anotumidzwa kubva kune echinyakare desktop dhairekitori mune yako dhairekitori repamba, kwaunogona kuwana ako desktop desktop. Saka, iyo "Folder View" sarudzo ichachengetedza zvidhori pa desktop.
Kana ukasarudza iyo "Desktop" kurongeka, ichasiya desktop yako icon isina uye yakajeka. Nekudaro, iwe uchazokwanisa kuwana iyo desktop desktop pane dhairekitori repamba.
In Wallpaper Mhando, unogona kusarudza kana iwe uchida Wallpaper kana kwete, kunyarara kana kuchinja uye pakupedzisira kupinda Positioning, inotaridzika sei pachiratidziri chako.
3. Zviito zveMakonzo
Bhatani rega rega rinogadzirirwa kune chimwe chezviito zvinotevera:
Iko kurudyi-kurongedza kwakagadzirirwa Yakajairwa Menyu, inova iyo menyu kana iwe uchinyatso-baya pane desktop. Zviri mukati memenu zvinogona kuchinjwa nekudzvanya pane icon yekugadzika padivi payo.
4. Nzvimbo yezvinyorwa zve desktop yako
Iyi sarudzo inongowanikwa chete kana ukasarudza iyo "Folder View" mune iyo Wallpaper tab. Nokusingaperi, izvo zvirimo zvinoratidzwa pane desktop yako ndizvo zvaunazvo pane desktop desktop pane dhairekitori repamba. Iyo tebhu yenzvimbo inokupa iwe sarudzo yekuchinja izvo zvirimo pakombuta yako, nekusarudza rakasiyana dhairekitori.
5. Desktop Zvidhori
Pano unogona kusarudza marongero emifananidzo (yakatwasuka kana yakatwasuka), kurudyi kana kuruboshwe, maitiro ekumisikidza uye saizi yawo. Kana izvi zvisina kukwana, iwe une zvimwe zvekushongedza maficha ekuongorora.
6. Desktop Mafirita
Ngativei vakatendeseka pachedu! Ini ndinotenda wese mushandisi anopedzisira aine rakazara desktop pane imwe nguva. Kana desktop yako ikashata uye ikasakwanisa kuwana faira, unogona kuisa sefa kungava nemazita kana kutaipa uye uwane zvaunoda. Kunyangwe, zvirinani kugadzira yakanaka faira yekuchengetedza imba tsika!
7. Kunyorera Dhibhodhi
Kana iwe uchida iyo GNOME 3 application launcher, iwe unogona kuyedza iyo KDE application dhibhodhi. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kudzvanya kurudyi pane menyu icon> Ratidza Dzimwe nzira.
Dzvanya pa "Kunyorera Dhibhodhi".
8. Window Manager Musoro
Sezvawakaona mu Xfce kugadzirisa dzidziso, iwe unogona kushandura iyo windows maneja theme yakazvimiririra mu KDE futi. Nenzira iyi iwe unogona kusarudza rakasiyana dingindira repaneru uye rakasiyana theme kune hwindo maneja. Kana madingindira akaiswa kare asina kukwana, unogona kudhawunirodha zvimwe.
Akafuridzirwa kubva MX Linux Xfce edition zvakadaro, ini handina kukwanisa kupokana neangu andinofarira "Arc Rima".
Enda kune Zvirongwa> Kunyorera Sisitimu> Hwindow kushongedza> Musoro
9. Musoro wepasi rose
Sezvambotaurwa pamusoro, kutaridzika uye kunzwa kweiyo KDE plasma pani inogona kugadziridzwa kubva kuZvirongwa> Global theme tab. Iko hakuna huwandu hwakawanda hwetimu hwakafanotungamirwa, asi iwe unogona kurodha theme kuti ienderane nekuravira kwako. Iyo yakasarudzika Breeze Rima chihwitsi cheziso, hazvo.
10. Zviratidzo Zvirongwa
Iyo system icon dhizaini inogona kuve yakakosha maitiro pane iyo desktop inotaridzika. Chero ipi sarudzo yako, iwe unofanirwa kusarudza iyo yakasviba icon vhezheni kana yako yepasi rose theme irima. Musiyano chete uripo pane icon icon musiyano, iyo inverted kune iyo yepaneru ruvara kuti iite kuti iverenge. Iwe unogona nyore kuwana iyo icon tabo pane system maseteni.
11. Mafonti esisitimu
Mafonti eSystem haasi panzvimbo yekutarisisa, asi kana iwe ukapedza hafu yezuva rako pamberi pechidzitiro chingave chinhu chimwe chekutambudzika kweziso. Vashandisi vane dyslexia vanozokoshesa iyo OpenDyslexic font. Sarudzo yangu yemunhu ndeye font yeUbuntu, iyo kwete chete ini yandinowana inofadza asi zvakare yakanaka font yekushandisa zuva rangu pamberi pechiso.
Unogona, hongu, isa mamwe mafonti pane yako Linux system nekuzvirodha pasi kune zvekunze zvinyorwa.
KDE Plasma ndeimwe yematafura akachinjika uye akajairika anowanikwa munharaunda yeLinux. Kunyangwe iwe uri tinkerer kana kwete, KDE Plasma inogara ichichinja desktop desktop ine anoshamisa emazuva ano maficha. Chikamu chakanakisa ndechekuti inogona zvakare kugadzirisa pane zvine mwero masisitimu ekugadzirisa.
Iye zvino ndakaedza kuita uyu mutungamiri kutanga-ane ushamwari. Ehezve, panogona kuve neakanyanya kufambira mberi maitiro akadaro hwindo switching animation. Kana iwe uchiziva zvimwe, wadii kugovana nazvo nesu muchikamu chekutaura?
Maitiro ekuita kuti iyo Plasma desktop iite senge Unity
Dhawunirodha Icons Zve Ubuntu - Gumi Zvakanakisa Icons Themes for Ubuntu